သတိရှိရှိဖန်တီးရန်သော့နှစ်ဆယ် - Gregg Braden - Afrikhepri Fondation
Le mariage de la science et de la spiritualité pourrait-il élucider les plus profonds mystères de notre passé et résoudre les problèmes qui menacent notre avenir? Comme le démontrent un nombre croissant d’indices, la réponse à cette question est très positive et encourageante. Joignez-vous à Gregg Braden pour ce voyage extraordinaire qui englobe la science, la spiritualité et les miracles à travers le langage de la divine matrice.
1 သော့ချက်: ဘုရားသခင့ matrix ကိုဖြစ်ပါတယ် င် de l’univers, le တံတား အတူတူအရာအားလုံးကိုချိတ်ဆက်နှင့် ကြည့်မှန် ငါတို့ဖန်တီးင့်သောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြသသည်။
2 သော့ချက်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာရှိကွောငျးအရာခပ်သိမ်းသည်အခြားအရာအားလုံးကိုချိတ်ဆက်
3 သော့ချက်: Pour puiser à même la force de l’univers, nous devons nous voir comme une partie du monde plutôt séparés de lui.
4 ကီး: စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့ကြသောအရာ အမြဲအတူတကွချိတ်ဆက်ရှိနေဆဲ, qu’elles soient physiquement unies ou non.
5 သော့ချက်: L’acte de focalisation de notre conscience est un acte de création. La conscience crée !
6 သော့ချက်: ကျနော်တို့မဆိုလိုချင်သောအပြောင်းအလဲများကိုဖန်တီးအားလုံးကိုလိုအပ်သောအခွင့်အာဏာရှိသည်!
7 သော့ချက်: L’objet de notre focalisation consciente devient la réalité de notre monde.
8 သော့ချက် : ဒါဟာဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး ပွောဆို ကျွန်တော်တစ်ဦးသစ်ကိုအဖြစ်မှန်ကိုရွေးချယ်ရုံတကား!
9 သော့ချက်: C’est le langage du sentiment qui “parle” à la Divine Matrice. Sentez que votre but est atteint et que votre prières est déjà exaucée.
10 ကီး: Ce n’est pas n’importe quel sentiment qui fera l’affaire. Ne peut créé que celui qui est dénué d’ego et de jugement.
11 သော့ချက်: ကျနော်တို့ကိုရှေးခယျြသောငါတို့ဘဝအသက်တာ၌ဖြစ်လာရမယ်‘expérimenter ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးအဖြစ်။
12 သော့ချက်: Nous ne sommes pas liés par les lois de la physique telles que nous les connaissons aujourd’hui
13 သော့ချက်: Chaque morceau d’un ” quelque chose d’holographique reflète ce “quelque chose” en entier
14 သော့ချက်: L’hologramme universellement interconnecté de la conscience nous assure que nos désirs et nos prières sont déjà rendus à destination dès l’instant où nous les créons.
15 ကီး: Par l’hologramme de la conscience, tout changement ayant lieu dans notre vie reflète partout dans notre monde.
16 သော့ချက်: Le nombre minimal de personnes requises pour “déclencher” un changement dans de conscience est celui-ci : 1% d’une population.
17 သော့ချက်: ဘုရားသခငျ့ Matrix ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်ဖန်တီးသောဆက်ဆံရေးကိုထင်ဟပ်
18 ကီး: La source de nos expériences négatives peut se ramener à l’une des trois peurs universelles ( ou à une combinaison de trois ) : la peur de l’abandon, de ne pas être à la hauteur, ou de faire confiance.
19 သော့ချက်: ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးရင်းနှီးဆက်ဆံရေးအတွက်ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်
20 သော့ချက်: Nous devons devenir dans notre vie ce que nous choisissons d’expérimenter dans notre monde.
ဘုရားသခင့ Matrix, Gregg Braden
ဘုရားသခင့ Matrix: အချိန်နှင့်အာကာသစည်းလုံးညီညွတ်ရေး, အံ့ဖွယ်အနှင့်ယုံကြည်ချက်
€ 1 မှအသစ် 17,95
နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအောက်တိုဘာလ 25, 2020 12:01 pm တွင်နောက်ဆုံးတင်ခဲ့သည်
မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းခြင်း၊ လမ်းညွှန်မှုအပန်းဖြေခြင်း (ဗီဒီယိုများ)
Ubuntu - အာဖရိကအတွေးအခေါ်နိယာမ